Archive du 20180224
“Sémi-rémorque” nandona Sprinter 7 maty, 3 naratra tany Moramanga
Olona 7 no indray namoy ny ainy ary 3 no maratra mafy vokatry ny lozam-pifamoivoizana mahatsiravina niseho tao Antsirinala, 10 km tsy hahatongavana an’i Moramanga raha avy aty Antananarivo, teo amin’ny PK7, ny alakamisy alina tokony ho tamin’ny 12 ora.
Rajaonarimampianina tany Frantsa Misy zavatra afenimpenina mihitsy…
Mbola mampametra-panontaniana hatramin’izao ny dia an-tsokosokon’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tany Frantsa ny sabotsy 17 febroary, ary nody mangingina ny takarivan’ny talata 20 febroary teo.
Ravalomanana olon’i Afrika 2017 Hatolotra anio ny amboara
Hatolotra anio sabotsy 24 febroary any Johannesbourg Afrika Atsimo ny amboara lehibe tamin’ilay fifaninanana hahafantarana izay ho olon’i Afrika 2017, nokarakarain’ny Gazety boky African Leadership Magazine, hoenti-mamoaka ny anaran’ireo olo-malaza eo amin’ny tontolon’ny “leadership” na ny haitarika.
Arlette Ramaroson Hilatsaka hofidiana filoham-pirenena
Mafana dia mafana ny raharaha politika eto amintsika amin`izao fotoana izao ary tsy misy vahaolana ankoatra ny fifidianana. Mpanao politika tsy dia mpiseho firy Rtoa Arlette Ramaroson izay filohan`ny ``vondron`ny Tia Tanindrazana ho an`ny Fanarenana an`i Madagasikara``
Mba ampianaro ny ekipa e..
Miarahaba ra Jean a.Aiza indray ianareo amin’izao ee..hainareo mihitsy mantsy ity mandeha tsy re, tonga tsy miteny.Firy andro aty aoriana ve vao mizara vaovao, raha ohatra izao tsy nisy nahita iny dia nodianareo fanina tahaka ny fanaonareo.
Fanamboarana vola sandoka Kolonely iray voatonontonona fa atidoha
Nanomboka ny taona nivalona iny dia fahoriana ho an’ireo tantsaha Malagasy ao Toamasina ny fisolokiana sy famitahana mahazo azy ireo amin’ny fampiasan’olona vola sandoka 10.000 ariary sy 20.000 ariary mividy vokatra amin’izy ireo.
Olana eo amin’ny Malagasy sy ny Sinoa ``Aleo samy mitaiza ny adalany``, hoy i Johanesa Rakotonirina
Rehefa misy fiarahamiasa amin`ny firenena roa dia samy mikatsaka ny tombontsoany ny roa tonta. Fanamafisana sy fampiroboana ny fiarahamiasa an`i Madagasikara sy Sina no tanjon`ny Fikambanana Fifankatiavan`ny Malagasy sy ny Sinoa izay tarihan` i Johanesa Rakotonirina.
Vatobe efa mitresaka eny Ambatovinaky Ahiana hirodana sy hitera-doza
Taorian’ny filatsahan’ilay vato be izay nahafatesana olona maro teny Ampamarinana dia nahazo fanairana avy amin’ny manodidina indray ny alin’ny alakamisy 22 febroary 2018 ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny, fa misy bolongam-bato be ahiana hianjera eny amin’ny fokontany Ambatovinaky.
Nianjeran'ny vatobe teo Ampamarinana Hadinon'ny fanjakana ao amin'ny HJRA i Mamy
Herinandro katroka anio ny nisehoan'ilay loza mahatsiravina, namoizana ain'olona fito mianaka tetsy Ampamarinana vokatry ny fianjeran'ny vatobe iray izay namotika trano telo teny an-toerana.
Fiambenana ny AAA-Tiko tsy hisokatra Lany vola ny faritra Vakinankaratra
Rovitra ny kitapom-bolan’ny faritra Vakinankaratra hanakaramana Emmoreg hiambina ny orinasa AAA-Tiko Andranomanelatra tsy hisokatra.
Ady amin’ny kolikoly Miady irery ny Bianco
Ny birao mahaleotena misahana ny ady amin’ny kolikoly na ny Bianco no nanao ny fanadihadiana mikasika ny fanadinana hidirana tao amin’ny ENMG, izay nofoanana farany teo, hoy ny fanazavan’ny filohan’ny SMM, Faniry Ernaivo, tamin’ny antso an-tariby omaly.
Andohatapenaka Maka toerana tsimoramora ireo mpivarotra
Henjana ny asa miandry ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety sy ny minisiteran’ny Fitaterana manoloana ny fanaraha-maso ireo mpivarotra etsy amin’ny Fasan’ny Karana mikasa ny hifindra toerana eny amin’ny toby fiantsonana vaovao eny Andohatapenaka.
Rava trano teny ambanin’Ampamarinana Tsy mbola nahazo fanampiana hatreto
Ankoatra ireo aina nafoy miisa fito dia trano telo no potika tanteraka vokatry ny fianjeran’ilay vatobe teny Ambanin’Ampamarinana ny herinandro lasa teo.
Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy LANZIZY Talenta voajanahary ny filalaovana baolina kitra ho anay
Nanararaotra ny dia notanterahina tany Mahajanga izahay eto amin’ny Tia Tanindrazana ka nanararaotra nitafatafa tamin’ny Kintan’ny baolina kitra iray nalaza tamin’ny fotoanandrony tany an-toerana ary dia hisaorana azy indrindra etoana ny nanekeny niroso tamin’izany dinika ho fampahafantarana azy bebe kokoa izany
AT2B Basket-Ball 10 taona isika izao
Feno 10 taona katroka amin’ity taona 2018 ity no nitsanganan’ny “Association sportive” AT2B na Andraisoro Tia Basket-Ball tantanan’ny filoha mpanorina azy, Fanja Rabenjamina.
Tanànan’i Mahajanga Manjaka ny fitaterana amin’ny Bajaj
Vao miditra ny tanànan’i Mahajanga ianao ankehitriiny dia misongadina ny loko mavomavon’ny Bajaj iray amin’ny fitaovana fitateran’olona hampisain’ny mponina an-davanandro ao amin’ity renivohitry ny voninkazo ity.
Na iza na iza dia samy am-bavahoana, hoy ny tononkiran’ilay mpanakanto ara-pilazantsara iray izay. Arakaraky ny fivoaran’ny siantsa sy izay heverina ho fahaizan’olombelona no toa vao mainka mampihena ny androm-piainan’ny ety ambany masoandro.
Varotra elektronika Maro no voafitaka
Taorian’ny fampiofanana nomena ireo mpisehatra rehetra miisa 60 afaka handavorary ny tontolon’ny lalàna sy ny fampandehanana ny varotra elektronika na ireny varotra ifanakalozana amin’ny aterineto itony ny 19 ka hatramin’ny 22 febroary teo dia nampahafantarina omaly tetsy amin’ny tranoben’ny varotra etsy Antaninarenina omaly ny fehezan-dalàna tsara ho fantatra momba izany.
Lavanila any SAVA Misy nanesika fantsika hampitombo ny lanjany
Tsy honohono fa tena izy. Misy manafangaro fantsika ny lavanila masaka efa vonona haondrana any ivelany. Nahita maso ny fisian'izany, omaly, ny minisitry ny varotra sy ny fanjifana,
Faritra ara-toekarena manokana (Z.E.S) Miahiahy ny any Antsiranana
Tapitra omaly tetsy amin’ny hotely San Cristobal Ivato ny dinika momba ilay tetikasa ZES teto Antananarivo. Anio kosa no hijery ifotony any amin’ilay toerana atao hoe Andrakaka any Antsiranana, izay toerana ametrahana ilay tetikasa, ireo mpandray anjara liana.
Banky eto Madagasikara Manahirana ny olona
Tsy mahagaga raha 5%-n’ny mponina eto Madagasikara ihany no miserasera amin’ny Banky eto Madagasikara. Ankoatra ny fahasarotan’ny taratasy izay takiana amin’ny fidirana ho mpikambana dia mampitaraina ny olona ihany koa ny sara alaina amin’ireo tolotra maro samihafa ao amin’ny Banky.
Lalam-pihariana kafe, lavanila, cacao, lojy Hampitomboina ireo haondratsika any ivelany
Hohatsaraina ireo karazana lalam-pihariana misy eto amintsika toy ny kafe, ny vanila, ny cacao, ny lojy...
Vehivavin’ny faritra 22 Hasandratra etsy Mahamasina
Ao anatin’ny fankalazana ny andron’ny vehivavy na ny 8 martsa dia hisy ny hetsika « Vohitra kanto fihary » izay hiarahan’ny minisiteran’ny mponina sy ny orinasa Mada vision mikarakara etsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina ny 2 ka hatramin’ny 5 martsa izao
Fahalanian’i Donald Trump Mbola mananosarotra ny fanadihadiana
Mitohy ny fanadihadiana momba ny fitsabahan'ny Rosianina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tany Etazonia farany teo. Mba ahafahana mahatratra ny tanjona dia nanitatra ny sehatry ny fikarohana ny mpampanoa lalàna manokana Robert Mueller.